VACC4000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်ကို တစ်နာရီတွင် ၄၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်နံပါတ် ၂၅၀၉၆၉ တရားဝင်လက်မှတ်ရရှိထားပါတယ်။
မော်ဒယ်- VACC 4000
အမြိုးအစားခှဲခွားထားသောနရော: ရေစစ်ထုတ်သောလိုင်း ,	RO-VACC-mm
ကုနျပစ်စညျးရဲ့ ကုဒျနံပါတျ: VACC4000
With the application of the most advanced water filtration technology, the VACC4000 Purified water filtration system can be used to turn the water of different sources into pure water, satisfying QCVN 6-1:2010/BYT standards.
ခေတ်မီတဲ့ အပလီကေးရှင်း နည်းပညာကြောင့် VACC4000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာက ရေအရင်းအမြစ်မျိုးစုံကို ရေသန့်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပြီး QCVN 6-1:2010/BYT စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ ကိုက်ညီစေပါတယ်။
With technology improvement, the machine offers an outstanding filtration ability which is much faster compared to the previous products. On average, the machine can be used to filter 4,000l/hour.
နည်းပညာတိုးတက်မှုကြောင့် ဒီစက်က ထူးချွန်တဲ့ စစ်ထုတ်နိုင်သော အရည်အချင်းကြောင့် အခြားစက်တွေထက် ပိုမြန်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နာရီမှာ ၄၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
Bottled water filtration line - VACC4000 model is directly imported and distributed by Viet An. This is one of the most advanced filtration systems nowadays which will help you to produce pure water of the best quality, ensuring food safety and hygiene standards and energy savings and long shelf life.
ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာ VACC4000 ကို တိုက်ရိုက်တင်ပို့ထားပြီး Viet An မှ ဖြန့်ချီပါတယ်။ ဒီစက်က အကောင်းဆုံးရေသန့် အရည်အသွေး၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်စေတဲ့ စံချိန်စံနှုန်း၊ အင်နာဂျီ ချွေတာခြင်း၊ သက်တမ်းကြာခြင်းတို့ကို သေချာစေတဲ့ စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
What is the outstanding features of the purified water filtration systems of Viet An?
Viet An မှ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေရဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ?
Currently, in the market, there isawide range of water filtration systems but Viet An’s VACC4000 Purified water filtration system is mostly chosen byalot of customers. In response to the customers’ trust, we always try our best to improve the technology to provide them with the best products at the most reasonable prices.
ယနေ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိနေပေမယ့် Viet An မှ စက်တွေကိုတော့ ဝယ်ယူသူတွေ အများဆုံး ရွေးချယ်ကြပါတယ်။ ဝယ်ယူသူတွေရဲ့ ယုံကြည်မှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့က ဝယ်ယူသူတွေကို ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး အရည်အသွေးမြင့်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ပေးဖို့ အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်။
Nowadays, the water source is dramatically polluted. Along with that, the clean water is in short supply. This has seriously affected our health and lives. Meanwhile, water accounts for 70% of the body structure. We need water for every activity. On average, each of us needs from 1.5-2l of water daily. Otherwise, it will interrupt the body's activities, leading to decreased resistance, increased risk of disease.
ယနေ့ခေတ်မှာ ရေအရင်းအမြစ်တွေက ညစ်ညမ်းနေပါပြီ။ အဲ့ဒါကြောင့် ရေသန့်က ရေတိုပဲ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ရေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ၇၀% ကို နေရာယူထားတာကြောင့်ပါ။ ကျွန်တော်တို့က နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုအတွက် ရေကို လိုအပ်ပါတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့် တစ်နေ့ကို ၁.၅-၂ လီတာ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို နှောင့်ယှက်နိုင်ပြီး ရောဂါတွေ ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
And what our body needs is pure water. In order to meet the increasing demands for pure water, the bottled water manufacturers are required to improve capacities and production scales. The price per bottle of purified water at the shops or restaurants ranges from4to 20 thousand.
ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ရေသန့် လိုအပ်ပါတယ်။ ရေသန့်လိုအပ်ချက်တွေ တိုးလာတာကြောင့် ရေဘူးလုပ်ငန်းတွေက ဘူးတွေပိုများအောင် ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ ဆိုင်တွေ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာာ ရေသန့်ဘူးဈေးက ၄၀၀ ကနေ ၂၀၀၀ အတွင်း ရှိပါတယ်။
If you are the owner ofapurified bottled water filtration plant and want to upgrade the production technology, this VACC4000 Purified water filtration system will be the best choice for you.
တကယ်လို့ သင်က ရေသန့်ဘူးစက်ရုံပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာကို အဆင့်မြှင့်တင်ချင်တယ်ဆိုရင် VACC4000 ရေသန့်စစ်ထုတ်ကိရိယာက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
- This isasmart, genuine water filtration system of the USApec brand, meeting ISO 9001:2015 standard. The product is assembled byacompetent and qualified engineering team of Viet An.
-ဒီစက်က USApec တံဆိပ်ရဲ့ စမတ်ကျပြီး စစ်မှန်ကာ ISO 9001:2015 စံချိန်မီတဲ့ ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစက်ကို Viet An ရဲ့ အတွေ့အကြုံရှိပြီး တော်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ တပ်ဆင်ထားပါတယ်။
- VACC4000 is one of the best water filtration systems currently. On average, the machine can be used to filter 4,000l/hour. This capacity is suitable for bottled water manufacturers of medium sizes.
-VACC4000 က ယခုအခါမှာ အကောင်းဆုံးသော ရေစစ်ထုတ်ကိရိယာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နာရီမှာ ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၄၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ဘူးအလတ် ထုတ်လုပ်တဲ့ စက်ရုံတွေအတွက် အထူး သင့်တော်ပါတယ်။
- The filtered water meets QCVN 6-1:2010/BYT standards of the Ministry of Health. This is verified by the water testing indicators by the most reputable units today.
-စစ်ထုတ်ထားတဲ့ ရေက ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့ QCVN 6-1:2010/BYT နဲ့ ကိုက်ညီပါတယ်။ ရေစစ်ဆေးခြင်းပြတဲ့ စက်နဲ့လည်း စစ်ဆေးပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
- Withadouble bactericidal system and bacteria filter integrated, this machine offersamuch better sanitizing ability than previous products.
-နှစ်ဆ ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်စနစ်ကြောင့် ဒီစက်က အခြားစက်တွေထက် ပိုပြီး ပိုးသတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
- In addition, the machine also features smooth operation,aclosed filtration system withasmart control panel tot automatically in case of mechanical broken.
The water purification system works stably, withalong shelf life to save production costs.
စက်ရဲ့ ချောမွေ့စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ပျက်စီးယိုယွင်းမှုအတွက် ထိန်းချုပ်ဘောင်လည်း ပါရှိပါတယ်။ ရေသန့်စင်ပေးတဲ့ စနစ်က တည်ငြိမ်စွာ လုပ်ဆောင်ပြီး ကြာရှည်လည်း ခံပါတယ်။
Operation manual လုပ်ဆောင်မှု
This is one of the water filtration products with high filtration speed and an hourly capacity of 4,000L/hour. However, this capacity also varies depending on the water intake, operational process, and power supply. Thus, to ensure the above capacity, please clearly define the water intake and regularly maintain the filter components as mentioned in the operational manual.
ဒီစက်က တစ်နာရီမှာ ၄၀၀၀ လီတာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းက ရေအရင်းအမြစ်၊ လည်ပတ်ပုံ၊ ပါဝါပေးပို့မှုတွေအပေါ် မူတည်ပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ပြောင်းလဲပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပေါ်က လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအတိုင်း သေချာချင်တယ်ဆိုရင် ရေရယူမှုကို သေချာသတ်မှတ်ပြီး စစ်ထုတ်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းတွေကို မှန်မှန် ထိန်းသိမ်းပေးရပါမယ်။
- The filter cartridges and RO membrane should haveaclear origin. The filter replacement time is from6months to2years
-စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်နဲ့ RO အလွှာပါးက မူလ သန့်ရှင်းနေသင့်ပါတယ်။ ပြန်ပြီး အစားထိုးတဲ့ အချိန်က ၆ လမှ ၂ နှစ်ထိပါ။
- Do not disassemble the components in the purified water production line in any abnormal cases.
-မူမမှန်မှုတွေ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ အစိတ်အပိုင်းတွေကို မဖြုတ်လိုက်ပါနဲ့။
- Make sure to have the machinery maintained by Viet An’s technical team.
-Viet An မှ နည်းပညာအသင်းရဲ့ ထ်ိန်းသိမ်းမှုရရှိတာ သေချာအောင်လုပ်ပါ။
If you are interested in this VACC4000 40000L/H water filtration system, visit us at our branches in Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, Buon Ma Thuot forafree consultation on technical information of the products.
တကယ်လို့ ဒီစက်အကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Hanoi, Ho Chi Minh City, Da Nang, Buon Ma Thuot တို့မှာရှိတဲ့ ရုံးခွဲများတွင် လာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
For other products, please see at https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc .
အခြား ပစ္စည်းတွေအကြောင်း သိရှိချင်တယ်ဆိုရင် https://vietan.vn/day-chuyen-loc-nuoc မှာ ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
Or Call us now at 0949 414141 forafree consultation.
ဒါမှမဟုတ် ၀၉-၄၉၄၁၄၁၄၁ ကို ဆက်သွယ်ပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းခံနိုင်ပါတယ်။
2 Air disinfection lamp လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်6pc VA/ USApec
3 Air disinfection lamp hanger လေပိုးသတ်ထားသောမီးအိမ်ထည့်ထားသည့်ရုံ6pc VA/ USApec
15 Industrial filter housing စက်ရုံသုံး စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ့်1 pc VA/ USApec
18 RO membrane RO အလွှာပါး2pc Hitech-USA/CSM Korea
20 Pressure gauge ဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ3pc VA/ USApec
21 Oil pressure gauge ဆီဖိအားတိုင်းတာကိရိယာ2pc VA/ USApec
26 Ozone machine အိုဇုမ်းစက်2pc VA/ USApec
27 Industrial filter housing စစ်ထုတ်ကိရိယာအိမ် 1 pc VA/ USApec
28 Bacterial filter Cartridge ဘက်တီးရီးယား စစ်ထုတ်ကိရိယာတောင့်5pc VA/ USApec
Hỏi đáp & đánh giá VACC 4000 4000LPH ရေသန့်စစ်ထုတ်ခြင်းစနစ်